Ndiani “Akakwegura pamazuva” anotaurwa nezvake pana Dhanieri 7? | Swedera Pedyo naMwari
Nei Uori Husingaperi?
Zvinoita Here Kuti Munhu Atendeseke Munyika Ine Uori?
Kuchinjwa Kwakaitwa Imwe Mhuri yechiHindu neShoko raMwari
DZIDZA KUBVA MUSHOKO RAMWARI
Zvingaita Here Kuti Urarame Nokusingaperi?
“Akakwegura Pamazuva Akagara” Pachigaro
“Mukadzi Akanaka Kwazvo”
Kuroora Kana Kuroorwa Ndiko Kunoita Kuti Munhu Afare Here?
NYAYA DZEMUBHAIBHERI DZEKUDZIDZA
Ngwarira Kuda Chinzvimbo!
Nharireyomurindi | October 2012
BHAIBHERI rinoti: “Hapana munhu akamboona Mwari chero panguva ipi zvayo.” (Johani 1:18) Muviri waMwari unobwinya chaizvo zvokuti hapana munhu wenyama neropa angamuona akararama. (Eksodho 33:20) Zvisinei, dzimwe nguva Jehovha akaratidza vamwe vanhu zvakaita kudenga. Mumwe wevanhu ivavo aiva muprofita Dhanieri. Hapana mubvunzo kuti zvaakaona zvakaita kuti aremekedze Mwari zvikuru uye zvinogonawo kuita kuti tidaro. Ona marondedzerero anoita Dhanieri zvaakaratidzwa. *—Verenga Dhanieri 7:9, 10.
“Akakwegura Pamazuva.” Zita iri rokuremekedza iro rakangoshandiswa naDhanieri oga, rinoreva munhu akura kana kuti achembera. (Dhanieri 7:9, 13, 22) Jehovha ane makore akawanda zvakadini? Sezvo ari “Mambo asingagumi,” hapana paakatangira uye hapana paachagumira. (1 Timoti 1:17; Judha 25) Izvi zvinotiratidza kuti Mwari ane uchenjeri husina pahunogumira sezvo Bhaibheri richiratidza kuti vanhu vakura vane uchenjeri. (Jobho 12:12) Chokwadi tingaomerwa nokubvuma pfungwa yokuti Mwari haana paakatangira uye haana paanogumira. Asi zvine musoro here kuti titarisire kuziva zvose nezvaMwari uyo ane uchenjeri husina mumwe munhu?—VaRoma 11:33, 34.
Ona kuti Akakwegura Pamazuva ‘akagara pachigaro.’ Aigarirei? Dzimwe ndima dziri muchitsauko ichi dzinotibatsira kuziva mhinduro yacho padzinotaura mashoko akadai sokuti “dare” uye ‘kururamisira.’ (Dhanieri 7:10, 22, 26, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi) Saka pane zvakaonekwa naDhanieri, Jehovha aiva akagara pachigaro seMutongi womudare. Aitonga vanaani? Aitonga marudzi epanyika anofananidzwa nemhuka dzinotaurwa mundima dziri kunotangira chitsauko chacho. * (Dhanieri 7:1-8) Jehovha Mutongi akaita sei?
“Chipfeko chake chakanga chakachena sechando, uye bvudzi romusoro wake rakanga rakachena semvere dzemakwai dzisina tsvina.” Ruvara ruchena runomirira kururama uye kutsvinda. Dzimwe mvere dzemakwai dzine ruvara ruchena. Saka bvudzi rakaita semvere dzemakwai rinenge riri jena. Imbofungidzira zvakaonekwa naDhanieri. Ita souri kuona Mutongi iyeye ane bvudzi jena, zvichida akapfeka nguo yakachena sechando. Mashoko okufananidzira aya anotiyeuchidza kuti Jehovha anotonga zvakarurama uye zvine uchenjeri. Uyu ndiyeka Mutongi watinofanira kuvimba naye uye kuremekedza zvakanyanya.
Uyu ndiyeka Mutongi watinofanira kuvimba naye uye kuremekedza zvakanyanya
“Paiva nezviuru zvine chiuru zvairamba zvichimushumira, uye zviuru gumi zvakapetwa kane zviuru gumi zvairamba zvimire pamberi pake chaipo.” Vashumiri vokudenga ava ndivanani? Bhaibheri rinoti ngirozi ‘vashumiri vaMwari.’ (Pisarema 104:4) Ngirozi dzaMwari idzo dzingangosvika mazana emamiriyoni, dziri kushanda nesimba ‘kuita zvaanotaura uye zvaanoda.’ (Pisarema 103:20, 21) Izvi hazviratidziwo here kuti Mwari ane uchenjeri husina pahunogumira? Ndiani mumwe kunze kwaJehovha angakwanisa kuramba achitungamirira uto guru iroro rokudenga kwemakore asingaverengeki?
Zvakaonekwa naDhanieri zvinoita kuti tivimbe naJehovha uyo Akakwegura Pamazuva. Kutonga kwake kwakarurama uye tinogona kuvimba nouchenjeri hwake. Wadii kudzidza zvakawanda nezvokuti ungaita sei kuti uswedere pedyo naMwari ane uchenjeri hwose?
Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna October:
Dhanieri 4-12–Hosiya 1-14
^ ndima 3 Dhanieri haana kuona Mwari pachake. Asi Mwari akamuratidza mifananidzo yakajeka mupfungwa dzake yezvinhu zvaaigona kunzwisisa. Saka Dhanieri paaitsanangura zvaakaona, akashandisa mutauro wokufananidzira, kusanganisira zviya zvokurondedzera Mwari sokunge kuti munhu. Izvi zvinotibatsira kuti tinzwisise zvakaita Mwari asi hatifaniri kufunga kuti Mwari anotova munhu sesu.
^ ndima 5 Kana uchida tsanangudzo yemhuka dzakaonekwa naDhanieri, ona chitsauko 9 chebhuku rinonzi Fungisisa Uprofita hwaDhanieri! rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
October 2012 | Uori—Hwapararira Zvakadini?
NHARIREYOMURINDI October 2012 | Uori—Hwapararira Zvakadini?